के दोस्रो बच्चा पाउनु आवश्यक छ? प्रश्नोत्तर
HomeJiban Sailiके दोस्रो बच्चा पाउनु आवश्यक छ? प्रश्नोत्तर
प्रश्न: के दोस्रो बच्चा पाउनु आवश्यक छ?
उ तपाईंको पहिलो बच्चाको भाइ/बहिनी हो। यो एक सुन्दर सम्बन्ध हो जुन तपाईंले आफ्नो बच्चालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ।
त्यहाँ धेरै चीजहरू छन् जुन आमाबाबुसँग साझा गर्न सकिँदैन तर दाजुभाइसँग साझा गर्न सकिन्छ।
काका भाइ हुनु, साथी हुनु भन्दा फरक छ। दाजुभाइ वा बहिनी हुनु एक आशिष् हो। आमाबाबुले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई यो खुशी दिनु पर्छ यदि तिनीहरूले सक्छन्।
ती स-साना झगडा, माया, खाना/खेलौना बाँडफाँड, आफ्ना आमाबुवा पनि, यो एक व्यक्तिको जीवनको महत्त्वपूर्ण र सुन्दर भाग हो जुन एकल बच्चाको जीवनबाट छुटेको छ।
मसँग वर्णन गर्ने शब्दहरू छैनन्, तर मेरा दाजुभाइ र दिदीबहिनीसँग भएका सम्झनाहरू, मेरा दुवै छोराछोरीमा मैले देखेको बन्धन अनमोल छ।
मेरो अनुसार यो आवश्यक छैन तर यो हुनुपर्छ।
हेर्नुहोस्, मेरा बच्चाहरू सँगै:
खुशी को परिभाषा। हैन?
त्यसैले, आमाबाबुले कम्तिमा दुई बच्चाहरू हुनुपर्छ।
यो मेरो विचार हो, मानिसहरूले एउटा मात्र मन पराउँदैनन् वा कहिलेकाहीँ एक पनि।
त्यहाँ कारणहरू हुन सक्छन्, त्यसैले म केवल मैले अनुभव गरेको कुरा बताइरहेको छु।
यदि हामी सन्तान जन्माउने कुरा गर्दैछौं भने सबैभन्दा पहिले तपाईंले आफ्नो जस्तो जीवित व्यक्तिलाई जन्म दिनुभएको छ, त्यसपछि तपाईंले आफ्नो जीवनमा सामना गर्नुभएका सबै समस्याहरू सम्झनुपर्छ। यदि तपाईलाई कुनै समस्या भेटिएको छैन भन्ने लाग्छ भने, यो धर्ती हेरौं जहाँ प्रदुषण, जलवायु परिवर्तनका कारण दिनहुँ लाखौं मानिस भोकले मरिरहेका छन्, कति जीवजन्तुहरू लोप हुने कगारमा छन् र अन्य धेरै समस्याहरू जस्तै हावा । ,पानी,शारीरिक,मानसिक मानिसले पिडा भोग्नु पर्छ किनकी उसको आमाबाबुले आफ्नो खुशीको लागि सन्तान चाहन्छन्,यस सोचका कारण हामी सबै जन्मियौं तर के हामीकै कारण खुशी भए,अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले यो आँकडा सार्वजनिक गरेको छैन कि कति अभिभावकहरु खुशी छन् ? तिनीहरूका छोराछोरी र तिनीहरूले जारी राखे पनि, सबै दुखी हुनेछन्।
अर्कोतर्फ, एक सन्तान, दुई सन्तान वा हजार जन्माउन चाहनेहरूले इमान्दारीपूर्वक आफैंलाई यो प्रश्न सोध्नुपर्दछ कि उनीहरू आफ्नो जीवनबाट सन्तुष्ट छन्? र सन्तुष्टिको अर्थ व्यभिचारका सामानहरू जम्मा गर्नु होइन। उनीहरुमा मानसिक शान्ति छ कि छैन । यदि हो भने सन्तान जन्माउनु पर्छ हैन यदि उनिहरु शान्त छैनन् भने आफ्नो समस्या आफै समाधान गर्नुहोस् र थाहा छ हामीलाई खुशी अरु कसैले दिन सक्दैन चाहे त्यो श्रीमान्, श्रीमती, छोराछोरी होस्, सरकार होस्, राजनीतिज्ञ होस् वा फिल्म स्टार होस् । कुनै पनि बाह्य कुरा।
हो, यदि तपाइँ पहिलो बच्चालाई जन्म दिनको लागि रमाइलो गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ यो गर्नुपर्दछ। रमाइलो भन्नाले, मेरो मतलब बच्चाको खुशी हो। यदि तपाईंले पहिलो सन्तानबाट केही खुशी महसुस गर्नुभयो भने, तपाईंले दोस्रो सन्तानको बारेमा सोच्नुपर्छ। किनभने जीवनमा बच्चाहरूको खुशी आफैमा एक अद्वितीय अनुभव हो।
Satpal Singh Bhawarयो आवश्यक छैन कि अर्को बच्चा पनि जन्मियोस्।
मलाई थाहा छैन कतिपय पुरुषले महिलालाई सन्तान उत्पादन गर्ने कारखाना ठान्छन् । यसको मूल कारण शिक्षाको अभाव र परिवार नियोजनको जनचेतना अभियानको अभाव हो ।
आज पहाडी क्षेत्रका अधिकांश मानिसमा ०८–१० बालबालिका छन् । न त उनीहरुको शैक्षिक स्तर राम्रो छ न आर्थिक स्तर राम्रो छ । यहाँ केटाकेटीहरू दैनिक ज्याला मजदुरी गर्न अन्य राज्य वा सहरमा जान्छन्। यी क्षेत्रहरूमा कुपोषण र भोकमरी जस्ता समस्याहरू व्याप्त छन्। तर यहाँ लिंग अनुपात धेरै राम्रो छ किनभने केटा र केटी बीच कुनै भिन्नता छैन।
Previous articleहोसियार ! थाहै नभै गुम्न सक्छ तपाईंको मिर्गौला
Next articleसुनको मूल्य घट्यो- यस्तो छ आज को कारोबार
यी हुन् ३० पटक जागिरबाट अस्वीकृत भएका अर्बपति
महिलाको रोजाईमा कस्ता पुरुष पर्छन ?
Internet Khabar Staff - June 10, 2022